Ndabara ụzọ ámá IP 192.168.0.1 bụ nke a na-etinye n'ọrụ site na ndị rawụta tinyere modem dị ka D-Link router dị ka adreesị IP ndabara ịbanye na njikwa njikwa. Iji hazie ntọala 192.168.0.1 dị elu ma nwee ike iji ya rụọ ọrụ.
192.168.0.1 Admin Banye
Nzọụkwụ iji banye na IP 192.168.0.1
Ọ bụrụ na adreesị IP ahụ maka ndabara maka Mọdem / Internet Router bụ 192.168.0.1 n'ọnọdụ ahụ, ị ​​nwere ike iji ya banye nbanye n'ime nhazi njikwa maka Modem / Router na-achịkwa Ntọala Internetntanetị. Nanị nbanye n'ime 192.168.0.1, na-eso n'okpuru ntuziaka
Jide n'aka na ngwaọrụ agbakwunye na sistemụ ma n'elu Ethernet Waya ma ọ bụ na-enweghị waya.
Ugbu a mepee ihe nchọgharị weebụ ị na-eji iji nweta Internetntanetị.
Na adreesị mmanya, pịnye http://192.168.0.1 or 192.168.0.1.
Nbanye peeji nke rawụta gị yana modem ga-adị na ihuenyo.
Nyefee ndabara nbanye Ids dị ka aha njirimara na mgbakwunye na paswọọdụ maka nhazi peeji nke gị rawụta.
Oge ị weghaara ndekọ nbanye, ị ga-abanye na nhazi webpage na mgbakwunye ga-ama otu esi eme mgbanwe ndị achọrọ.
Enweghi ike idobe akụkọ banyere nkọwa nbanye n'elu Keywords?
Inyocha akwụkwọ Ntuziaka
Ọ bụrụ na ị na-emeghị icheta nbanye nzere maka 192.168.0.1 e mesịa ị kwesịrị ị na-enyocha akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ na Box nke rawụta. Na mgbakwunye, ị ga-enyocha ndabara rawụta ndepụta maka aha njirimara yana passkey maka ndị na-eme njem.
Ọ bụrụ na ị gbanwetụrụ ndabara nbanye nkọwa nke rawụta na leghaara ya anya na juncture ụzọ kacha elu bụ iji laghachi iji weghachite bụ rawụta nrụpụta na ndabara ntọala nke na-agbanweghachi mgbanwe niile ọzọ na ndabara. Maka rawụta nrụpụta:
Jide ihe a kapịrị ọnụ dị ka ihe ntanye ezé ma ọ bụ Pin ma gbalịa ịchọta mgbanwe nrụgharị na ndị na-eme njem azụ.
Oge ahụrụ ntakịrị ntakịrị ihe mgbanwe nzuzo. Pịa & jide ntughari maka ihe dịka 15-20 sekọnd site na ihe a kapịrị ọnụ.
Nke a ga-eweghachi mgbanwe niile ọzọ na ndabara ntọala yana aha njirimara / okwuntughe nke ị gbanwere. Ya mere ugbu a ị ga-enwe ike nbanye na ndabara nbanye ikike.
Onwe IP zuru ezu nwere ihe dị ka nde 17.9 dị iche iche, ha niile ewepụtara maka iji na netwọkụ ndị nkeonwe. Ya mere, onwe IP rawụta adịghị mkpa ka ahụkebe.
Na ngwaọrụ niile na netwọk rawụta na-ekenye adreesị IP echekwara, ma ọ bụ ntọala azụmaahịa ma ọ bụ obere netwọkụ ụlọ. Ngwaọrụ niile dị na sistemụ nwere ike jikọọ gadget gadget ọzọ na sistemụ yana IP nkeonwe a.
Agbanyeghị, adreesị IP onwe ya enweghị ike ịnweta ụgbụ. A ga-esonye adreesị IP nkeonwe na Onye na-eweta ọrụ ,ntanetị, dịka, Comcast, pectdị dị iche iche ma ọ bụ AT&T. Yabụ ugbu a, ngwaọrụ niile ejikọtara na ịntanetị ọ bụghị ozugbo, na-ebu ụzọ jikọọ na sistemụ ahụ, nke agbakwunyere na ịntanetị, emesịa jikọọ na nnukwu ịntanetị.